Semalt - Nzira Yokutaura Sei Cyber ​​Scam?
Tsvina ye MasterCard breaks in Home Stop, Target, uye mamwe mazvitengesi makuru zvakakanganisa chaizvo munhu wose. Kazhinji, kuwanda kwekweretheni chekwereti kunopfuura kwepamusoro pemutengi.
Iva iyo sezvaingaita, zvakanyanya pedo neimba inyaya iyo isu tose tanga tine mukana wekutora ma email. Ndezvipi zvimwe emaEndaneti nhau dzekuchengetedza dziri papamusoro pakurasika 'ubongo. Takakumbira kuchengeteka kwako nenyaya dzinoshungurudza, uye nechokure, dzakawanda dzaive dzakafanana neyameri.
Oliver King, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira we Semalt , akabatana nevanoongorora vekuchengeteka vari pedyo, avo vakapa ruzivo neruzivo rwezvakaitika, zvigadziriswa zvinogadziriswa uye mazano ekuchengetedza nzvimbo yakasimba kubva kune njodzi gare gare - melhores sites wordpress.
Nyanzvi: Grayson Milbourne, Greg Foss, naPaul Madsen.
Oliver King: Nguva pfupi yapfuura imwe PC yakagadzirwa neWindows 7 yakaiswa. Kubvira ipapo kusvika mberi, ndakabhabhatidzwa nemakwikwi ekutsvaga - zvakasuruvarisa zvakanyanya. Ruzhinji rwemashoko aya ane "kusazvinyora" chisarudzo chokutora. Kamwe kamwe mune imwe nguva, vane mbiri dzakasiyana. Ndanga ndisinganyora zuva rose, izvo zvinoda nguva yakawanda yekutsvaga, uye chikamu chezviziviso zvakafanana zvinoramba zvichidzoka. Pane imwe nzira yakanakisisa yekutsvaga mishonga iyi?
Webroot: Zvinyorwa zvisingabvumirwi nezvemashoko makuru ezvinyorwa zvinonyengera uye zvinoshandiswa nevashambadzi kuti vanzwisise pavanogamuchira" mahara "e-mail yekero ine mikana yekuwedzera spam.
ChirongwaRhythm: Mune zvimwe zviitiko, spam inogona kunge isina kukanganisa kurasa. Pasinei nokuti hazvibvumirwi nevatengesi kuti varambe vachikutumira meseji mushure mokunge maenda, vamwe vanonyatsorega izvi uye vanoramba vachitumira tsamba chero ipi zvayo.
Nzira yakanakisisa yokuvhara zvachose iyi spam ndeyokuita kuparadza maziso asina kunaka. Izvi zvichange zvichitumira chero email ipi neipi yaunowana kubva kwavari kusvikira pane faira yako.
Oliver King: Ndine mabhuku maviri e-mail. Mazuva mashomanana apfuura, ini zviri pachena ndakanamatira kubata kusina kukodzera mumabhuku angu eGmail, uye ikozvino ndiri kubhabhatidzwa muCenturyLink account nekusakosha kunokurudzira kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndingamisa sei izvi?
Webroot: Tora mazita se spam kana junk kubva purogiramu yako yeGmail. Kuita zvakadai kuchabatsira kuderedza nhamba ye spam yaunowana.
ChirongwaRhythm: Nzira yakanakisisa yekuenzanisa izvi ndeyokushandisa mafirita. Google ine chinyorwa chinoshamisa pamusoro pekuti mafirita anoita sei uye kuti ungashandisa sei ivo kugadzirisa nyaya yacho.
Oliver King: Kwemwedzi ichangopfuura, ndanga ndichitora mairi maviri kana mana evhangeri emazuva ese kubva pakero reRussia. Ndingada kuziva kuti aya aya mairi ndeapi, zvisinei, zvinonyanya kukosha zvingada kuti zvipedze.
Webroot: Kana iyi mharidzo ichibva kune imwe kero yakakodzera, iwe unofanirwa kuva nekwanisi yekudzivisa iyo kero kana kuiona semarara kana spam.
ChirongwaRhythm: Zvichida kuti email yako kero yakange yakawedzerwa zvisiri izvo kune yakarongwa. Nzira yakanakisisa yekuvhara zvachose iyi spam ndeyokuita kuti kuve nekutumisa zita re email.